Posted by Tranquillus | Feb 28, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Ka fogaanshaha khaladaadka higgaadinta ayaa muhiim u ah nolol maalmeedka iyo dhinacyada oo dhan. Xaqiiqdii, waxaan wax ku qornaa maalin kasta ha ahaato shabakadaha bulshada, emayllada, dukumiintiyada, iwm. Si kastaba ha noqotee, waxaad moodaa in dad aad iyo aad u tiro badani ay samaynayaan qaladaad higgaadin ah oo inta badan la fududeeyo. Haddana, kuwani waxay ku yeelan karaan cawaaqib xumo dhanka xirfadda. Maxaad uga fogaanaysaa khaladaadka higaada shaqada? Soo ogow sababaha.
Qofkii khalad ka gala shaqada ma aha mid la aamini karo
Markaad khaladaad higgaad ah ku sameyso shaqada, waxaa laguu arkaa qof aan la aamini karin. Tan waxaa lagu caddeeyay daraasadda " Barashada Faransiiska : caqabadaha cusub ee HR iyo shaqaalaha ”oo loo fuliyay magaca Bescherelle.
Xaqiiqdii, waxay muujisay in 15% loo shaqeeyayaashu ay caddeeyeen in khaladaadka higgaadda ay hortaagan yihiin dhiirrigelinta shaqaale ka tirsan shirkadda.
Sidoo kale, daraasad 2016 FIFG ah ayaa shaaca ka qaaday in 21% jawaabeyaashu ay rumaysan yihiin in xirfadahooda xirfadeed ay carqaladeeyeen higgaadintooda heerka hoose.
Tani waxay muujineysaa in marka aad higgaado heer hoose ah, madaxdaada aan lagu qancin karin fikradda ah in mas'uuliyado lagugu siiyo. Waxay u maleynayaan inaad waxyeello u geysan karto ganacsigooda oo aad si uun saameyn ugu yeelan karto kobaca ganacsiga.
Sameynta khaladaadka waxay dhaawici kartaa sumcadda shirkadda
Ilaa iyo inta aad ka shaqeyneyso shirkad, waxaad ka mid tahay safiiradeeda. Dhinaca kale, ficiladaadu waxay saameyn togan ama taban ku yeelan karaan sawirka midkaan.
Noocyada 'Typos' waa la fahmi karaa haddii ay tahay emayl si dhaqso leh loo soo diyaariyay. Si kastaba ha noqotee, higgaadinta, naxwaha ama qaladaadka isku xidhka ayaa aad looga carooday xagga aragtida dibadda. Sidaa darteed, shirkadda aad wakiilka ka tahay waxay halis weyn ugu jirtaa silica. Runtii, su’aasha inta badan kuwa ku aqriyaa ay isweydiin doonaan. Sidee ayay tahay in lagu aamino khibradda qofka aan qori karin jumladaha saxda ah? Dareenkan, daraasad ayaa muujisay in 88% ay yiraahdaan way naxaan markay arkaan qalad higaad ah oo ku yaal goobta hay'ad ama shirkad.
Sidoo kale, daraasadda loo sameeyay Bescherelle, 92% loo shaqeeyayaasha ayaa sheegay inay ka baqayaan in muuqaalka xun ee qoraalka uu dhaawici karo sawirka shirkadda.
Khaladaadka ayaa xaqiraya feylasha musharaxnimada
Khaladaadka higgaadinta shaqada sidoo kale waxay leedahay raad aan fiicnayn oo ku saabsan natiijada dalabka. Xaqiiqdii, sida ku xusan daraasadda "hanashada Faransiiska: caqabadaha cusub ee HR iyo shaqaalaha", 52% maareeyayaasha HR waxay yiraahdaan waxay tirtirayaan faylasha dalabka qaarkood sababtoo ah heer hoose oo Faransiis ah oo qoran.
Dukumiintiyada arjiga sida e-maylka, CV iyo sidoo kale warqadda dalabka waa in si adag looga shaqeeyaa oo marar badan dib loo akhriyaa. Xaqiiqda ah inay ku jiraan qaladaad qalad ah waxay la mid tahay dayacaad dhankaaga ah, taas oo siinaysa qorista aragti wanaagsan. Qaybta ugu liidata ayaa ah in laguu tixgeliyo karti la'aan haddii cilladaha ay badan yihiin.
Sababaha looga fogaado khaladaadka higaada shaqada 5-Maarso, 2021Tranquillus
horeHiggaadinta khaladaadka shaqada: sidee ayay kuu arkeen kuwa ku aqrinaya?
socdaGunnada waayeelka: waa heshiiska wadajirka ah ee tilmaamaya in loo adeegsanayo xisaabinta ugu yar ee lagu heshiiyey